Jony Ive chọrọ imepụta ihe ncha ncha | Esi m mac
Mgbe emechara ụfọdụ ngwa ọrụ teknụzụ kacha mara mma n'ime afọ iri abụọ gara aga, Onye isi ndị uwe ojii Apple, Jony Ive, nwere nchegbu ndị ọzọ n'uche, nchegbu ndị na-enweghị ihe jikọrọ ha na teknụzụ, kama na ndụ kwa ụbọchị nke ọtụtụ ndị mmadụ. Fewbọchị ole na ole gara aga, Norman Foster Foundation haziri nzukọ nke anyị nwere ike ịhụ dị ka kpakpando ọbịa Jony Ive, bụ onye hapụrụ ndị bịara niile gbagwoju anya mgbe ọ na-ekwupụta ihe ịma aka ọhụrụ ọ chọrọ ihu na nso nso: ncha ncha.
Tupu ịbanye Apple, Jony Ive na-arụ ọrụ na UK na otu n’ime ihe ndị kacha ewu ewu na ya bụ imepụta ụlọ ịsa ahụ́ zuru ezu, nke dị mwute ikwu na anyị enweghị foto. O yiri ka ike gwụrụ ya na nkà na ụzụ ma chọọ ịlaghachi na mgbọrọgwụ ya. Anọ m na Apple kemgbe 1992, ọ bụ akụkụ buru ibu nke imepụta iMac, iPod, iPhone, iPad, na Apple Watch. Mana mgbe ọ na-enweghị atụmatụ ọ bụla na-echere ma ọ bụ na-ewepụ oge, ọ na-akpọkọtara ya na enyi ya Marc Newson, iji hazie ihe eji emepụta, dị ka igwefoto Leica, otu n'ime atụmatụ ndị kachasị ewu ewu kachasị ewu ewu.
Dabere na Jony Ive, enweghị ezigbo ndị na-ekesa ncha na ọ bụ okwu na-enye ya nsogbu nke ukwuu, nke mere ka Jony gbado anya na oru ohuru gi n’inwe igwe ncha zuru oke, Ihe iDispenser. Jony egosighi nkọwa ndị ọzọ gbasara otu ezigbo nchụsasị ncha nwere ike ịbụ, yabụ n'oge a anyị enweghị ike ịmatacha ihe Jony na-eche ugbu a n'akụkụ a. Amaghị m n'ezie ihe Jony na-achọ na onye na-enye ihe, mana ọ ga-abụrịrị ihe pụrụ iche nye ya ịsị na e mepụtabeghị ncha zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Jony Ive chọrọ ịkepụta ncha ncha
Errata na paragraf ikpeazụ, ahịrị mbụ: ajụjụ 'na-akpasu ya iwe' nke ukwuu
Force Kwụsị Ngwa na macOS Sierra